Ku mahadnaq Dagaalyahan Street oo wata 55 farshaxan farshaxan | Abuurista khadka tooska ah
Street Fighter waa mid ka mid ah ciyaaraha ka tagay farshaxanka iyo dhiirigelinta ugu badan, iyadoo leh malaayiin taageerayaal ah oo diiradda saaray dib u soo nooleynta muuqaalo kala duwan oo ciyaarta fiidiyowga ama jilayaasha xaaladaha kala duwan, markaa waxaa jira hibo in muddo ah.
Waa taxane ah videogames de murugo oo ay abuurtay shirkadda softiweerka ee Jabbaan Capcom, oo magacooda adduunka oo dhami ka kordhay sanadka1991, markii Street Fighter II (Markii hore shirkadu waxay horey ugu raaxeysatay caan weyn mahadnaqa ciyaaraha arcade sida Ghouls 'n Ghosts, Strider, Final Fight, iwm.)
Boodka ka dib waxaa jira 55 farshaxan oo ay soo ururiyeen ragga HongKiat, taas oo ay tahay inay si weyn ugu adeegto ciyaarta fiidiyowga ee laga hadlayo.
Hadaad jeceshahay manga waxaan kugula talinayaa 100%.
16 Farshaxanno Fighter Street badan
Wuxuu ku dhashay Japan, Ryu waa mid ka mid ah dabeecadaha loogu jecel yahay uguna jecel yahay taxanaha SF. Wuxuu caadi ahaan ku labbisan jiray gi dhaqameedka cad, galoofyo gacmo-gashi oo aan casaan lahayn, suun madow iyo madax-cas cas. Ryu wuxuu sidoo kale caan ku yahay abuurista nabar xusuus leh oo ku yaal laabta Sagat, taasoo ka dhalatay nooc sare oo Shouryuuken ah intii lagu guda jiray tartankii Dagaalyahankii Adduunka ee ugu horreeyay.
RYU: Dabaysha Kacaysa (adoo adeegsanaya Mgnz)
Yaab VS Capcom 2: Ryu (adoo adeegsanaya Udoncrew)
Sharka Ryu (adoo adeegsanaya Fightersgeneration.com)
Ryu vs. Sagat (adoo adeegsanaya Braders1986)
Ken, shakhsiga 2aad ee caanka ah ee taxanaha ayaa sidoo kale xirta gi dhaqameed midab casaan ah. Sida Ryu, Ujeeddada Ken waa in lagu tijaabiyo xirfadahiisa ka dhanka ah dagaalyahanno badan oo kala duwan oo dadaal kasta laga dhigo kan ugu fiican.
sf4 ka (adoo adeegsanaya SFgalleries)
Ken vs. Vega (adoo adeegsanaya O-beto-O)
Chun Li waa haweeneydii ugu horreysay ee la ciyaari karo oo lagu muujiyo ciyaar dagaal 1-on-1 ah. In kasta oo aysan awood ahaan u awood badnayn sida jilayaasha kale, haddana iyadu way ugu dhaqsaha badneyd. Waxay badanaa ku labisnayd buluug qipao, dhar dhaqameed Shiineys ah. Timaheeda waxaa lagu qurxiyay «geesaha» oo lagu qurxiyay maraqyo iyo xargaha.
Qaabka Chunli (adoo adeegsanaya Artgerm)
Chun li (waxaa sii marinaya Mike Thompson)
Chun li (adoo adeegsanaya Ddd111)
Chun-Li (adoo adeegsanaya Erina)
Guile waa Gaashaanle ka tirsan Ciidanka Cirka ee Mareykanka. Guile wuxuu ka tagayaa qoyskiisa iyo dalkiisa si uu ugu biiro tartanka Dagaalyahanada Adduunka si uu uga aarguto geerida saaxiibkiis uu jeclaa Charlie, oo uu dilay M. Bison.
Haya'adda Guile (iyada oo loo marayo Michael Ryan Kime)
Gidaarka Guile (adoo adeegsanaya M16)
Canshuuraha Waddada 1 (adoo adeegsanaya Mgnz)
Blanka muuqaalkiisa bahalnimo waa shey ka mid ah tijaabada hiddo-wadaha Shadoloo. Blanka sidoo kale wuxuu caan ku yahay timaha liinta ee naxdinta leh. Wuxuu ku xayirnaa hawdka Brazil isagoo ilmo yar ah waxaana koray xayawaanka.
Calanka duurjoogta (adoo adeegsanaya Castello)
Dhalsim, oo ah nabad-doon, wuxuu ku dhashay Kerala, India. Master-kan yoga waxaa loo yaqaanaa madaxiisa bidaarta leh oo lagu xardhay xariijimo casaan ah, xargaha dhakada qoorta.
Xulista astaamaha- Dhalsim (adoo adeegsanaya Udoncrew)
Dhalsim vs Necro (iyada oo loo marayo DXS Infinite)
Derbiga Dhalsim (adoo adeegsanaya Manywallpapers)
Dhalsim: Yoga Blowfish (iyada oo loo marayo Zatransis)
E. Honda waa cayaaryahan sumo ah oo caadi ahaan arkay mawashi buluug ah oo farshaxan rinji cas leh wejigiisa. In kasta oo uusan waligiis kasban darajada ugu sarreysa sumo (Yokozuna), wuxuu helay kan labaad ee ugu sarreeya (Ozeki).
Honda yar (adoo adeegsanaya Dennisbell)
E Honda C2 (iyada oo loo marayo dagaallamayaasha)
E Honda C2 (adoo adeegsanaya Creativeuncut)
Sagat waa mid cabsi badan leh, waa hadiyad dabiici ah oo uu ugu adeegsado faa iidadiisa weeraradiisa dheer. Baaxaddiisa dabiiciga ah waxay ku kasbatay inuu noqdo dagaalyahan xoog badan oo argagax leh. Isagu gabi ahaanba waa bidaar leeyahay oo wuxuu xirtaa baarka indhaha si uu ugu daboolo ishiisa dhaawacan. Rug-weyntani waxay leedahay gacmo iyo cagaha ka weyn inta badan kuwa ka soo horjeeda.
Sagat SF (adoo adeegsanaya Umagafan84)
Cammy White ama Cammy wuxuu xirnaa leotard cagaaran oo cagaaran wuxuuna xubin ka ahaa koox ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Ingiriiska ee loo yaqaan Delta Red.
Xaasidnimo Cammy (adoo adeegsanaya Markovah)
Cammy Yummy (adoo adeegsanaya Artgerm)
Cammy (waxaa sii marinaya Omar-dogan)
Zangief waa halyeey qaran oo Ruush ah oo naaneysta ah, "Red Cyclone" Wuxuu bartay Gorbachev ilaa dhamaadka Alpha 2. Kadib markuu la kulmay Gorbachev, Zangief waxaa loo diray inuu ku tababaro qashinka Siberia, orso legdanka.
Zan Da Macaan (iyada oo loo marayo Mon3m)
Zangief vs Blanka (adoo adeegsanaya Kuroitora)
Zangief Street Fighter Fan fan (adoo maraya Giaci78)
Zangief SF (adoo adeegsanaya Leeyiankun)
Fanka fan Zangief (adoo adeegsanaya Jy-kim)
Vega waa dabeecad xiiso leh, maahan oo kaliya xiisaha uu u qabo quruxda, laakiin sidoo kale qaabkiisa dagaal ee u gaarka ah isagoo isticmaalaya ciddi uu isticmaalo. Wuxuu ka mid yahay jilayaasha SF ee sida joogtada ah u wata hub. Wuxuu bartay dagaalka dibida iyo ninjutsu, wuxuuna noqday dagaalyahan qafis.
Vega - Faahfaahin (iyada oo loo maro Varges)
P. F. Vega (adoo adeegsanaya Udon Crew)
Vega vs. Cammy (adoo adeegsanaya Jujika)
Balrog waa feeryahan Mareykan Mareykan ah oo laga mamnuucay feerka inuu si joogto ah u dhaawaco dadka ka soo horjeeda oo uu si kama 'ah u dilo mid. Balrog wuxuu ku biirayaa ururka dambiyada Shadaloo, wuxuuna ka soo shaqeeyay xagga hoose, ugu dambayntiina wuxuu noqday xerta dhow ee M. Bison.
Balrog (adoo adeegsanaya Syclown)
M. Bison badanaa wuxuu ku lebisan yahay dhar ciidan oo casaan ah, taarikada garabka waaweyn ee qalinka, iyo jubbad cawl ah. Ujeedada Master Bison ayaa ah inuu ku guuleysto awooda dowladaha adduunka isagoo adeegsanaya shaqsiyadiisa dambiga qarsoon, Shadaloo.
M.Bison Zbrush (adoo adeegsanaya Rv_el)
Sakura waa gabar reer Japan ah oo iskuul dhigata oo xiiso weyn u qabta Ryu. Waxay ku guuleysatay inay koobiyeysato oo ay barato qaar ka mid ah farsamooyinka Ryu. Ardaygan qurxan badanaa waxay ku dagaallamaan labbiska iskuulkeeda, badmaax farshaxan-gaab ah fuku.
Qorraxda Sakura (adoo adeegsanaya Artgerm)
Sakura cute (adoo adeegsanaya Markovah)
FAQ Sakura (adoo adeegsanaya Udon Crew)
Halyeeyada SF Sakura Issue 1B (adoo adeegsanaya Udon Crew)
Qaabka dagaal ee Akuma wuxuu isku daraa dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee Ryu iyo Ken. Wuxuu caan ku yahay farsamadiisa dhimashadiisa ee loo yaqaan, Shun Goku Satsu ama «Jinniga Raging». Akuma wuxuu leeyahay timo guduudan, wuxuu xirtaa gi giir madow, qoortiisana wuxuu ku xirtaa kuul salaada.
Xumaan akuma (iyada oo loo marayo Nefar007)
Akuma Saxeex (adoo adeegsanaya Comicvine)
Akuma vs. Dan (waxaa sii marinaya Omar-dogan)
Farshaxanno Fighter Street badan
Daboolka dagaalyahanada wadada (adoo adeegsanaya Diablo2003)
Fighter Street II 2 Dabool (adoo adeegsanaya Udoncrew)
Street Fighter (adoo adeegsanaya Benlo)
Jidka Canshuuraha ee Dagaalyahannada Jidka (adoo adeegsanaya Udoncrew)
SF Alvinlee Canshuur (adoo adeegsanaya Fiboy)
Buugga Fanka Fighter Street (iyada oo loo marayo imaginism)
Buugga Abaal Marinta Halgame Street (iyada oo loo marayo imaginism)
Jidka Dagaalyahan Jidka 2 (adoo adeegsanaya Udon Crew)
Street Fighter no.3 SHAQADA (adoo adeegsanaya Alvin Lee)
Kooxda Dagaal ee Chibi Street (iyada oo loo marayo Shauno)
Wadada halgamayaasha wadada jam (adoo adeegsanaya Udon Crew)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Ku taxaddar Street Fighter oo leh 55 farshaxan
Soo koobid.Jtv dijo
Kaliya waxaan dhihi karaa hal shay: heer sare !!